Xerooyinka qadada ayaa dib ugu soo noqda Yurub, gaas. - Dukaamada eGay
Sida dad badani diidaan Holocaustkii, hadda dadku waxay ka soo baxayaan bariga Yurub iyagoo sheegaya in xeryaha qaniimadu aanay jirin.
"Waxaa loogu yeeraa dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha inay sameeyaan dhammaan noocyo kala duwan oo lacag la'aan ah," ayuu yiri madaxweynaha Chechnya Ramzan Kadyrov. Chechnya waa xarun wayn oo Yurub ah oo lagu xukumo garsoor.
Wararka xeryaha xaraashka ayaa ka soo baxay 2017. Warbaahinta Ruushka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa tan u gudbiyay dhinaca galbeedka. Warbaahinta dalka Chechnya, warbaahintu waa dowlad la xakameyn karo, mucaaradana looma ogola, sidaas darteed helitaanka caddaynta dawladda waa mid aan macquul ahayn.
Madaxweynaha Katariga ayaa yiri, "Taasi waa wax kasta oo loo adeegsado wakiillada ajnabiga ah ee la siinayo kopecks yar." Kopeck, oo loo yaqaan 'ruble', waa lacagta ku jirta Chechnya. Hal kopeck waa mid ka qiimo ka yar laba cents US.
Madaxweyne Kadikov ayaa aad uga fogaaday sidii loo diidi lahaa khaniisiinta xitaa gobolkiisa. Luqadiisu waxay si aad ah u yaqaanaan diidmada dalalka Bariga Dhexe. Wuxuu yiri, "Haddii ay jiraan dad sida Chechnya ah, hay'adaha sharci fulinta uma baahna inay wax qabtaan iyaga maxaa yeelay qaraabadoodu waxay u diri lahaayeen meel aan laga soo noqon."
Diiditaankiisa ayaa sii waday xagaa dambe xagaagii lasoo dhaafay markii uu yiri, "Haddii ay jiraan wax khiyaano ah, iyaga naga qaado, si loo nadiifiyo dhiiggayaga, haddii ay jirto wax, qaado."
Warbaahinta Ruushku waxay soo bandhigtay sheekooyin badan oo ku saabsan cidhiidhiga gaas ee gobolka. Qaar ka mid ah dadka ka soo baxsaday aagga ayaa ka warbixiyay jirdilka ay soo mareen. Ugu yaraan mid ka mid ah, Mover Eskarkhanov, ayaa lagu tirtiray inuu raali galin ka bixiyay warbixintiisa jirdilka oo uu beeniyay inuu yahay khaniis.
Iyadoo xor ka ah jaahwareerka reer Chechnya, Eskarkhanov wuxuu leeyahay qooys ku hadhay. Wuxuu ku nool yahay Jarmalka. "Waxay caddeeyeen in haddii aan sii wado hadalka, waxaa jiri lahaa dhibaatooyin, waxay yiraahdeen waa inaan marka hore ka fekero qoyskeyga," ayuu u sheegay saxafiyiinta.
Qaar kale oo iyaguna baxsadeen oo aan lahayn qoys ay ka walwalsan yihiin waxay ku dhufteen sheekadooda jirdil iyo xadgudub.